Izindaba - CIAAR 2017 【Exhibition Live】
NgoNovemba 2017, i-15th International International Air Conditioning and Refrigeration Technology Exhibition (CIAAR 2017) yabanjelwa eShanghai Everbright Convention and Exhibition Center ngempumelelo. Njengombuthano waminyaka yonke womkhakha wezimoto opholisa umoya, noma ngabe kunjani embukisweni noma inani labathengi, bakhuphuke kakhulu ngokomlando. Lo mbukiso unezimpawu ezingama-416 ezihola phambili embonini kanye nezinkampani ezimele abasekhaya nabakwamanye amazwe ekhaya naphesheya kwezinsuku ezintathu. Ngasikhathi sinye, lo mbukiso uheha i-United States, Canada, Australia, Russia, South Korea, Egypt kanye no-10619 abavakashi abangochwepheshe abavela emazweni angama-44 nezifunda beza ukuzozithengela. Imibukiso ebandakanya izindawo ezintathu ezinkulu zomkhiqizo: imikhiqizo yezimoto efaka umoya opholisa umoya, izesekeli zefriji ephathekayo namadivayisi wokuhamba asefrijini.
Kusuka ku-2010 kuya ku-2017, inkampani yethu ibambe iqhaza emibonisweni engu-7 elandelanayo yaseShanghai, siye sabona ukuthuthukiswa okusheshayo kwe-air-conditioning yezimoto. Izimoto ziyizinto zokuhamba ezibalulekile ezimpilweni zabantu. Ngokuthuthuka kwezinga lokuphila kwabantu, bayanda abantu abaqala ukuthenga izimoto. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwezimoto ezinkulu kulethe uchungechunge lwezinkinga ezifana nokusetshenziswa kwamandla, ukushoda kwemithombo, kanye nokungcola kwemvelo. Lezi zinkinga zidale ukuthi izinkampani ezinkulu zezimoto zenze izinhlobonhlobo zezimoto ezintsha ezingenakho ukungcoliswa kwemvelo. Ukuze wanelise izidingo zawo, inkampani yethu ithuthukise ama-compressors kagesi wezimoto ezintsha zamandla. Izimoto zamandla ezisebenzisa amandla kagesi ezisebenza ngogesi zingasetshenziswa ezimotweni zikagesi ezinejubane eliphansi kanye nejubane elikhulu ukuhlangabezana nezidingo zabasebenzisi abahlukene. Imikhiqizo inokwethenjelwa okuphezulu. , Ukusebenza kahle okuphezulu, umthamo omkhulu wokupholisa, ukusebenza okuzinzile, umsindo ophansi, njll., Ongonga amandla cishe ngama-20% uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo.
Phakathi nezinsuku ezintathu, kunabakhangisi abaningi abasivakashelayo. I-rotary vane patent ayikhanga nje kuphela ukunakwa kwabaningi bezimoto ezifuywayo, kepha futhi nezivakashi eziningi zakwamanye amazwe bezinentshisekelo kuyo.Amakhasimende amaningi anentshisekelo acele ukufunda kabanzi ngemininingwane yolwazi lomkhiqizo, futhi bafuna ukuxoxisana embonini yethu. Ngombukiso, sifunde ngezidingo zemakethe, izinga lentuthuko embonini efanayo, namaphutha ethu. Sizosebenza ngokuzikhandla ukuzithuthukisa ngokuzayo, sithuthukise imikhiqizo emisha eminingi ukuze sanelise izidingo zemakethe, futhi silwele ukuthuthukisa umoya opholayo emkhakheni wezimoto.